DOWNLOAD Boeing F/A 18E Super Hornet FS2004
Last nohavaozina 30 / 11 / 2009The Boeing F / A-18E / F Super Hornet dia 4.5 + taranaka mitondra-monina multirole fiaramanidina mpiady. Ny F / A-18E tokan-seza Variant sy F / A-18F voizin'olon-droa-seza Variant dia lehibe kokoa mandroso Sampanteny ny F / A-18C sy D Hornet. Ny Super Hornet manan-anatiny MM 20 basy ary mety hitondra rivotra-to-rivotra balafomanga sy ny rivotra-to-ambonin'ny fitaovam-piadiana. Solika fanampiny dia afaka ho entina amin'ny niakatra ho dimy ivelany solika fiara mifono vy sy ny fiaramanidina afaka ny mampihaino ho mahazo haavo sambo amin'ny fampidirana ny ivelany refueling rivotra rafitra.
Natao ary tamin'ny voalohany novokarin'ny McDonnell Douglas, ny Super Hornet nanidina voalohany tao 1995. Full-tahan'ny famokarana Nanomboka tamin'ny Septambra 1997, araka ny Fampitambarana McDonnell Douglas sy Boeing volana teo aloha. Ny Super Hornet niditra fanompoana miaraka amin'ny tafika an-dranomasina tany Etazonia 1999, fanoloana ny F-14 Tomcat nanomboka 2006, ary manompo eo anilan'ny Hornet tany am-boalohany. Ao 2007, ny Royal Air Force Australian nandidy Super fanenitra mba hisolo ny be taona F-111 sambo. (Source Wikipedia)
Freeware add-on izay mety tsara kokoa noho ny tongotra! Mahagaga ny sarisary momba ny kalitao sy ny sidina! Ny vokatry ny G dia famerimberina tanteraka ary koa ny kitapo fandokoana. Ny sakamalaho virtoaly dia misy koa ary miasa tanteraka.
Ahitana mihoatra noho 60 variants
Downloads 32 771
Nohavaozina taminy 08-10-2012